PressReader - Ilanga: 2018-02-12 - BAXOSHE UTHISHANHLOKO
Ilanga - 2018-02-12 - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE mthobisis@ilanganews.co.za
UZITHINTELE iziqandu uthishanhloko waseQondindlela High School, kwesaKwaBiyela eNtambanana, eMpangeni, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal, okuthiwa uxoshwe ngabazali ngoba ubebabiza ngamaqaba namabhinca uma beyokwethula izikhalo zabo kuye ngezinto ezenzeka kulesi sikole.
Kubikwa ukuthi bavuke umbhejazane abazali bezingane ezifunda kulesi sikole behlangene nazo, bathi kabasadingi lutho olubahlanganisa nothishanhloko wakulesi sikole.
Okucasule kakhulu umphakathi wukuthi kunemibiko ethi uthishanhloko utshele abafundi ukuthi leli sonto ngelokugcina befunda kulesi sikole, kumele bayofuna izikhala kwezinye ngoba isikole uyasivala kwazise sehlelwe kakhulu yisibalo sabafundi ababhalisile.
Okunye okuthiwa kucasule abazali wukuthi kunezifundo azivalile uthishanhloko okubalwa kuzona iLife Sciences, iTourism, iPhysical Science, iMaths Literacy kodwa bangayithola incazelo.
Kubikwa ukuthi besebephoqwa abafundi ukuba benze ezinye izifundo.
Omunye umzali, ongathandanga ukuba lidalulwe igama lakhe, uthi izingane zabo zibatshele ukuthi kuqale nyakenye ukuvalwa kwezifundo, abazali bazama ukuxoxa nothishanhloko kodwa wangavuma ukubonisana nabo.
"Uma ethi isikole uyasivala, ubethi sizozishonisaphi izingane ngalesi sikhathi sonyaka ngoba zigcwele zonke izikole?” kusho umzali.
Uthi bebebukelwa phansi, kungekho ukuzehlisa kuthishanhloko emalungwini omphakathi ekubeni kungesiyena owendawo.
Utshele ILANGA ukuthi uthishanhloko ubethi ngeke atshelwe ngamabhinca yena.
Usihlalo wekomidi lentsha kwesaKwaBiyela, uMnu Bernard Mngadi, uthi bekungeke kulunge ukuba sivalwe isikole ngoba ezinye ezingomakhelwane ziqhelile, kuhanjwa amabanga alinganiselwa e-16km uma kuyiwa kuzona.
Utshele leli phephandaba ukuthi obekungehli kahle emphakathini wukuthi bezingamukelwa izingane uma ziyofuna izikhala ekubeni zinakho konke okudingekayo.
"Isikole sinezingane ezilinganiselwa kwezingama-94 kodwa kunenqwaba ebijikiswa. Izinto eziningi zixovekile nemikhakha efundwayo kayiqondile ngaphandle kowakwaCommerce. Kuqedwa ezinye izifundo ngaphandle kokuba kwaziswe abazali, nothisha abaningi bese behambile,” kusho uMnu Mngadi.
Ilungu lesigungu esilawula isikole, uMnu Jomo Biyela, lithe kuyiqiniso ukuthi umphakathi umxoshile uthishanhloko.
Uthe bayethemba ukuthi kuzoqalwa kufundwe namhlanje ngoMsombuluko - selokhu kuxoshwe uthishanhloko abafundi bebeya esikoleni bafike bazibukele izindonga.
Imizamo yokuthola abakhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, iphunzile kwazise izingcingo zabo bezikhala zingabanjwa.
Kuqedwa ezinye izifundo ngaphandle kokuba kwaziswe abazali.